Kismaayo News » Warlugeed: Fiqi oo Ethiopia oo hub kasoo gatay
Warlugeed: Fiqi oo Ethiopia oo hub kasoo gatay
Kn:Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya Fiqi ayaa kasoo laabtay safar uu ku tagay dalka Ethiopia isaga oo ay weheliyaan laba masuul oo wasaaradda difaaca ka tirsan. Wasiirka oo kusoo laabtey dalka ayaa saxaafadda usheegey inuu safarkiisu la xariiray xoojinta xiriirka labada dal balse KismaayoNews waxay heshay xog kusaabsan safarka Fiqi iyo waxii u tagay ee saxaafadda laga qariyay.
Safarka wasiirka ayaa ahaa mid aan la shaacinin oo aan helin soo dhaweyn iyo maamuuskii wasiir waloow maalmo kadib ay u suuro gashay inuu la kulmay Raisul Wasaaraha Ethiopia ayna ka wada hadleen xiriirka labada waddan. Balse muddadii uu joogey waxuu halkaas u tagay inuu si dhuumasho ah usoo gato hub u badan rasaas iyo qoryaha la saaro baabuurta ee Soomaalidu u taqaano Dhashiike. Wasiirka ayaa sidaan Warlugeed ku helnay soo iibsaday rasaas aad ubadan una badan qoriga AK47 iyo Qoriga BKM ka iyo dhawr kun oo qori oo isugu jira, AK47, BKM iyo Dhashiikeyaal ku kacay qiime malaayiin doolar ah.
Arintan ayaa timid kadib markii dawladda Ethiopia ay ku canaanatay dawladda inay leeyihiin warshado hubka iyo rasaasta laga gato ayna tahay in dawladda Soomaaliya ay ka gadato rasaasta iyo hubka intii ay Ugaandha u doonan lahaayeen mar haddii ay lacag heystaan. Dawladda Ethiopia ayaa ku dooday in hubka u geyn karto meelkasta oo dalka Soomaaliyeed ayna u sahlan tahay. Dawladda Soomaaliya oo rabta iney isku dhaweyso Ethiopia ayaa qaadatay goaan ah in markan bal wajigan rasaas badan iyo qoryo loo doonto dhanka Ethiopia.
Arinta la yaabka leh ayaa ah in wasiirkii wasaaradda uu isagu noqdo ninka soo gadaya rasaasta oo aan loo dirin masuuliyiinta iska lahaa shaqadaas iyadoo loo arki karo iney hoos dhac ku tahay in wasiir dhami iib doonto oo isagu dalabka, bixinta lacagta iyo waliba gorgortankaba isugu sameeyo. Waxaabase taasi ka sii daran in saxiixa kala gadashada hubka uu dhinaca Itoobiya u saxiixay sargaal darajadiisu ay aad u hoosayso oo hadii wasiirka gaashaan dhigga ama taliyaha ciidanka Itoobiya uu saxiixi lahaa ay noqon lahayd caano kugu daati. Arintan halista ay yeelan karto ee ugu horaysa waa in Itoobiya lacagtii qaadatay ayna ka bixi karto heshiiska maadaama uusan heshiiska sixiixin qof muctarif ah oo awood u leh inuu galo heshiisyada noocaasi oo kale ah.
Xogaha kale ee Warlugeed helaayo ayaa waxaa kamid ah in wasiirka gaashaandhiggu uu dalka S. Africa u raadsaday gaadiid dagaal, ayadoo hubka iyo gaadiidkaba ay qorshaynayaan inay geeyaan ama ka dajiyaan magaalada Baydhabo kadibna loo qaybiyo ciidamada ku sugan gobolada Bay, Bakool iyo Gedo.
Siday horay KN u tabisay waxaa jira abaabul dagaal oo ku waajahan magaalo xeebeedka Kismaayo kaasi oo ay si madax banana isula abaabulayaan wasiirka gaashaandhigga iyo kan arimaha Gudaha oo saacidaad iyo taageero ka helaayo xafiiska ra’iisul wasaaraha, waxayna qorshaynayaan inay hubka, saanadda iyo gaadiidkaba u isticmaalaan umuurtaasi, laakiin waxay caqabadda ugu horaysa kala kulmi doonaan xafiiska madaxweynaha oo asagu markani u soo jeestay in umuurta Kismaayo lagu dhameeyo waanwaan iyo wada hadal. Waxay u badantahay in madaxweynuhu qasbo in hubkaasi laga dajiyo caasimadda waaba hadii uu xili dhaw yimaado dalka ama aysan Itoobiya ka laaban heshiiska gabi ahaanba.
Walaaca dhanka ciidamada ee dalka jira ayaa ah in Ciidamada Soomaaliyeed ay wali kuwo u kala fadhiya beelbeel, mana jiro ciidamo qaran oo isku dhafan iyadoo magaalo walba oo Soomaaliyeed ay joogaan kaliya ciidamo kasoo jeeda magaaladaas. Ciidamadu ma helaan mushaaraad iyo daryeel kooda dhaawacma waxaana nasiib xumo noqonaysa in malaayiin lagu bixiyo rasaas aan la ogeyn meel lagu ridi doono iyadoo ciidamadii ridi lahaa ama ku hawlgali lahaa aysan ahayn kuwa qaran isla markaana aysan qaadanin mushaaraad muddo badan.
Dawladda guud ahaan iyo gaar ahaan wasaaradda difaaca ayaa ka gaabisey la dagaalanka Alshabaab iyadoo amnigii caasimadu khalkhal wayn ka jiro. Warlugeed ayaa xaqiijinaya in wasiirka gaashaandhigga dhawr jeer ay baarlamaanka dalku u yeereen balse uu ka warwareegayo iyagoo raba iney waydiiyaan su aalo badan oo la xariira Qaramaynta ciidanka Xoogga dalka, dagaaladii Kismaayo iyo guud ahaan gaabiska la dagaalanka Alshabaab. Sidoo kale golaha baarlamaanka ayaa manta u yeeray wasiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka si uu uga jawaabo suaalo la xariira amniga Qaranka, midka caasimadda, heshiiskii Hawada ee dalka Turkey, xaaladda Sheekh Xasan Daahir, arimaha gudaha, midka gobolada iyo dagmooyinka iyo inuu keeno xeerka gobolka Banaadir lagu dhaqayo kadib markii uu golaha baarlamaanka ka ansixiyay xeerka dagmooyinka iyo gobolada dalka.
Warlugeed oo soo laabatay kala soco wararka aad ka weydo warbaahinta kale